Sooyaalka taariikhda iyo La-xisaabtanka Xisbiga SDP – Xeernews24
Sooyaalka taariikhda iyo La-xisaabtanka Xisbiga SDP
28. Juli 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Shalay oo taariikhdu ahayd July 24, 2019, waxa 21 jirsaday xisbiga talada u haya deegaanka DDS. Sida uu hadalka u dulmaray Gudoomiyaha JWXO, Admiral Maxamed Cusman, waxaynu waydiinaynaa qaangaadhye maxaa laguu qiimeeyn karaa? Waa suaasha la rabo in aynu ka jawaabno. Taxanahan gaabani waxa uu ka koobanyaha sadex (3) qaybood:
1. Hordah ku aadan xaladiihii Itoobiya ka dhacay 1990hii iyo isbadelkii Siyaasadee
2. Qaybta labaad waxaan ku soo qaadi doonaa (1) aasaaskii ESPDP iyo humaagi Soomali lahay iyo kan Meles hoosta ku watay. Wax kale oon soo qaadi doonaa waxa u qabsoomay iyo waxyeelada uu Xisbugu umada gaadhsiiyey.
3. Qaybta sadexaad waxaan diirada saaridoona “dibu curashada xisibiga dhogor-badashay iyo humaaga/humaag la’aanta ku aadan sida uu wax u tarikaro Soomaalida. Waxaan diirada saaridoona xiligii CMC iyo hadeer uu MMC dhaxleen xisbiga
Intiit u dhaxaysay 1980kii ilaa 1991kii, Itoobiya (iyo weliba Soomaliya) waxaa lasoo darsay dhulgariir siyaasadeed (Political tsunami). Mangistu waxa uu gabogabeeyey red-terrokii ama gumaadkii dhiiga lahaa ee lagu qaaday mucaarika hubaysan iyo kan ardadiiba. Waxa buuraha galy xoogagii dagaalamayey. Waxa jabhado aan isjeclayn u kala baxay Tigree iyo Ethiopian People’s Revolutionary Party (EPRP). EPRP waxay u xuubsiibatay Ginbor 7, Andinet, NAM, iyo kuwo lake oo federaalka diidan.
Badhtamihii 1980hii, Dawladdi siyaad Barre ayaa heshiis xaba joojin ah lagasahy Mangistu. Heshiiskaas waxa saxeeyay AU Cabdiraxman Jamac Bare iyo Goshu Wlade, oo ahaa wasiirka arimaha dibada ee Itoobiya. Goshu Wolde oo ah Amxarada maylka adag manta waa xubin ka mid aha Gudida dubiheshiisiinta ee R/W Abyi dhawaan ku dhaqaaqay. Nin ka kani adag marak ay timaad mayal adagnimada Axmaarnimada waxa uu la midyahay najiskii Serbianka ahaa ee Slobodan Milošević. Waxay iasaga midyihiin xaga labaduba aaminsanyihiin in Itoobiya iyo Serbiyaba uu miciin u tahay Kiiniisada Ortodoxiska. In R/W Abiy nikaas oo kale dib u heshiisiin ka raadiyo waxay la mid tahay dooli dhintay urta ka soo baxda.
Heshiiskii dhexmaray Soomaliya iyo Itoobiya waxa uu horseeday in WSLF xafiisyada laga xidho, oo kentay curashadii JWXO (Dhalitii ka dhiidhiday heshiiska ayaa JWXO samaysay – 1984-1986).
Agagaarkii May1991, waa xiligii TPLF awooda kala waree rabtay Mengistu Xayle, shir dagdag ah ayaa Mareykanku isugu yeedhay xogagii hubaysnaa ee Itobiya ka dagaalamaayey. Shirarkaas waxa ka horeeyey dhowr shir uu marti galiyey Madexweynihii hore ee Mareykanka uu samaystay “Carter Center for Conflict Resolution.” Soomaalidu shirakaas xarunta Carter wey ka maqnaayeen xaaladu cakiran oo arligeena xiligaas ka taagnaa awgood.
Waxa shirka horumood ka ahaa Herman Cohen (Xoghayihii Arimaha Afrika ee Mareykanka) iyo aqooyahan uu watay oo la odhan jiray Paul Haines (Cohen hada waxa uu aaminsanyahay in Soomalida xornimo taam ah la siiyo).
Marka shirku qabsoomayo oo ahaa badhtsmihii (May ilaa June) 1991kii, ciidamada TPLF Addis Abab ayey ku soo food lahaayeen. Bishuftu gacanta TPLF ayay ku dhacday, dhowr kiloometerna waxay u jireen Addis Ababa. Shirku waxa uu ka mid ahaa u diyaarinta TPLF in ay qabshada Addis Ababa, iyo la wareega awooda dalka oo dhan.
Waxa shirka isugu yimid TPLF, Oromo Liberation Front (OLF), iyo kuwo TPLF samaysatay sida OPDO, EPDF oo ahaa Axmarada, iwl. Waxa talo lagu gaadhay in laga marmaan tahay in WSLF iyo ONLF shirka London ay ka soo qayb galaan (xiligaas, WSLF magac ahaan ayuun bay u jirtay oo Siyaad Bare ayaa badashay, JWXO layslis aan weli 10 jirsan ayey ahayd). Shirkaa JWXO way qaadacday.
TPLF waxay horaantiiba shirka usoo bandhigay labo hidiso oo muhiim ahaa: (1) Charter ama axdi, iyo (2) khariirad cusub (New Map) oo qeexaysa qowmiyaduhu sida ay u kala daganyihiin.
Muhiimadu waxay ahayd in la dhiso dawlad coalition ama loo dhanyahay. Maqaalkaygii ugu horeeyey een Itoobiya ka qoro waxa uu soo baxay June 1991, oon ku daabacay Ethiopian Review oo maalgalin jirtay hayada Carter Center. Waxaan taageeray Mapka cusub, waxaanan ku taageeray cutub ahaa „The New Map of Ethiopia). Amxaaro badan oonu xaaxiibo jaamacada ku ahayn maqaalkayga way saluugeen. Waxaanse taabacsanaa shaqsi ahaan dhulka Soomaaliyeed ee la israaciyey iyada oo la tix raacayo arkiiviyada taariikhda taalay. Charterkuna waxa uu ogolaa in Soomalidu iskeed isu tasgo karto.
Khriidads cusub iyo charterkuba ilaa xad wey ina deeqin Soomaali ahaan. Waxa dheeri ahaa in
TPLF intay is xilqaantay ay AU Sheekh Cabdi Naasir iyo Majeerteen oo ku xanibnaa Muqdishu iyo dagaaladii sokeeye ee Soomaali ka dhex taagnaa si xeelad leh uga soo saareen. Waxa TPLF istimaashay Helikoptaro Suudani amaahisay.
Badhtamihii 1991, TPLF waxay dhistay dawladii ku meelgaadhka ee lagu hungoobay. Soomali markiiba halbowlaha siyaasadeed ayey jartay. Wax aan shan (5) kursi ka badnay ayey Soomaali siisay. Cad quudheed ayuu ahaa. Arintaas xataa dadka aan Soomaalida ahayn laakiin siyaasada Geeska Afrika yaqaan wey u cuntami weyday. AU Sayid Khalifa oo ahaa ruug-cadaa wariye Suudaani ah (a seasoned Sudanese journalist) ayaa Meles wareysi dheer ka qadayay agagaarkii July 1991. Waxa uu weydiiyey:
“Mudana Meles, maxay ku dhacday Soomaalida oo soo kifaaxday qayb libaaxna ka qaadatay la dagaalankii Xayle Silaase iyo Mengistuba in aad quudka siyaasadeed ku yareyso.”
Jawaab: “Soomaalidu waa xoola raacato oo uma bisla dawladnimo iyo maamul,” ama “Somalis are nomads and are not ready for administration.”
Maqaal ayaan xiligaasana ka qoray aan leeyahay Meles Soomaali naar ayuu la beegsanayaa, yasidaasina waxay ku tusaysaa in aanu nabad ka rabin Soomaali. Sidiina wey u dhacday sida hada taariikhdu ka marag kacayso. Mar kaliya Meles Soomaalida waji daacad ah kulama dhaqmin. “Qawda maqashii waxna ha u qaban” ayuu intu noolaa iyo intii nidaamka u dhisay weli sii jiro kula dhaqmay Soomaalida.
Dacad la’aantaas laga dhaxlay Meles iyo Xisbiga ESPDP oo hadana la baxa SDP waa mataano. Marka aynu darsaynu qadiyada Soomaalida, ma aha arin shaqsi Soomaaliyu oo kaliy uu wata, ee waa arin ka dhaxaysa nidaamka Addis Ababa ka dhisan iyo hirgalinta loo qoondeeyey hogaamiyayaasha Jigjiga jooga.
Taariikhdu waa macalinka ugu doorka roon. Mawduucaasina waa labada qaybood eek u xiga.
Waa bilaahi Twofiiq.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/04/astaan.jpg 307 314 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-07-28 09:16:422019-07-28 09:16:42Sooyaalka taariikhda iyo La-xisaabtanka Xisbiga SDP
Muuqaalka gabadhii looga shakisan yahay in ay fulisay qaraxii G/Banaadir iyo... Daawo; Xaalada Gobolka Sanaag oo Halis Daaqaysa